यान्त्रिक पुल बन्यो ब्रह्मलुट यन्त्र ! ३३ प्रतिशत भाडा बृद्धि गरेपछी लगाएको ताला अझै खुलेन ! – ebaglung.com
यान्त्रिक पुल बन्यो ब्रह्मलुट यन्त्र ! ३३ प्रतिशत भाडा बृद्धि गरेपछी लगाएको ताला अझै खुलेन !
२०७३ चैत्र ६, आईतवार १४:४२	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
महेन्द्र केसी, पर्वत २०७३ चैत ६ । कुस्मा बलेवा यान्त्रिक पुल सन्चालनमा आए देखी नै ब्रह्मलुट यन्त्रका रुपमा चर्चामा रहँदै आएको छ । पुल सन्चालनमा आएको एक वर्षमै लगानीको धेरै भाग असुल उपर गरिसकेका यसका शेयरवालाहरु प्रत्यक वर्ष मनग्गे आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
लामो समय सम्म यान्त्रिक पुलको मर्मत नगरिएपछी स्थानीवासीले पुलमर्मत गर्न दवाव दिएकाले माघ महिनामा पुल मर्मतका लागी १९ दिन बन्द गरिएछी फागुन महिनाको पहिलो सातामा सन्चालनमा आएको हो । कम्पनिले पुलको मर्मत पछी ह्वात्तै ३३ प्रतिशत भाडा बृद्धि गरेको हो ।
सन्चालनमा आए यता पुलमा भएको लगानी पूरै असुल भएको अवस्था छ, तर अभैm भाडा बृद्धि गरिरहँदा आम नागरिकमाथी थप आर्थिक भार थोप्ने काम जारी रहँदा पनि कसैबाट चासो नलिईएपछी स्थानीयवासीहरु यान्त्रिक पुलका सन्चालकहरुको बिरुद्ध उत्रिएका हुन् ।
यस यान्त्रिक पुलबाट वारपार गर्नेहरु ९० प्रतिशत बागलुङ जिल्लाका बलेवावासी हुन् । ‘जुकाले रगत चुसेझै पुलले बलेलीहरुलाई चुसी रहेको छ, पीडित एक बलेवालीले भने, ‘जनताको सुविधाको लागि यान्त्रिक पुल सन्चालनमा ल्याएको नभै हामी बलेवालीहरुलाई ब्रह्मलुट गर्ने यन्त्रको रुपमा प्रयोग गरिदै छ ।’
शोषणको असह्य पीडा सहन नसकेपछीबागलुङ बलेवाबासीले यान्त्रिक पुलको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् । झण्डै एक सातादेखि यान्त्रिक पुलमा आवतजावत ठप्प बनेको छ । मनोमानी तरिकाले भाडादर बृद्धि गरी पुलका शेयर सदस्यहरु कमिशन खाने चक्कर लागि जनतालाई सास्ती दिन खोजेको भन्दै उनीहरुले तालाबन्दी गरेको बताएका छन् ।
यान्त्रिक पुल व्यवस्थापनले चैत १ गते देखि लागू हुने गरी ३३ प्रतिशत नघटने गरी भाडा बृद्धि गरेको थियो । आधा किलोमिटरको यात्रा ४ मिनेटमा पार गर्न १ सय २५ रुपैंयासम्मको भाडा निर्धारण गरेको कम्पनीको विरुद्धमा वलेवा क्षेत्रका महिला समूहको अग्रसरतामा तालाबन्दी गरिएको हो ।
स्थानीयका लागि साविकका रु ७५ रहेको रु १०० र अन्यत्रका लागि रु १ सय रहेकामा रु १ सय २५ लिने गरी भाडावृद्धि गरेको थियो । यसैगरी मासिक रुपमा आउने व्यक्तिका लागि रु दुई हजार भाडा रहेकामा अहिले बढाएर रु दुई हजार ५०० पु¥याइएको छ । भने रु एक हजार ८०० मासिक तिरेर यात्रा गर्ने विद्यार्थीहरुको भाडा बढाएर अहिले रु २ हजार पु¥याइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
साताको तस्वीर : सुख्खा पहिरोको सास्ती ।
मिलनचोक केन्द्र कायम गर्न माग गर्दै हजारौँ जनताव्दारा जिल्ला प्रशासन घेराउ !